Haweenay lagu eedeeyay in ay la seexatay wiil da’a yar wadanka ku jooga | Somaliska
Haweenay ka shaqeysa xarunta soo dhaweynta caruurta magangalyo doonka ah ee wadanka da’da yar ku yimaada ayaa lagu eedeeyay in ay la seexatay mid ka mid ah wiilasha halkaa ku xareysan oo wadanka ku joogo 16 sano.
Haweeneyda ayaa shaqada laga cayriyay isla markaana dacwo looga gudbiyay booliska iyadoo lagu eedeeyay in ay ka faaidaysay wiilka maadaama ay qaabilsanayd daryeelkiisa.
Hadaba ma la dhihi karaa haweeneyda ayaa ka faaideysatay wiilka mise isaga ayaa ka faaideystay maadaama uu wadanka da’a yar ku joogo?
Reer Soomaali ah oo cunsuriyad darteed uga guuray tuulada Tomelilla [Video]
Sweden oo si rasmi ah u aqoonsatay Falastiin
God Man Eller förvaltare , Somaliska Tolk Gävle says:
December 23, 2011 at 19:17
Asc … Qoraalkan Waxaan Uga Jawaabayaa Fikirkeyga Si Sharciyan ah Inta aan fahamsanahay .
Qiima Ma Leh Kalmada Ah kafaaideysi labdooda mid ka mid arinkaa uu u sameeyey . Sharciga waxuu dhigayaa in wiilka yar iyo qofka gacanyaraha ah uusan wax xiriir shaqsi ah uusan dhex mari karin waa mamnuuc in ey kawada hada arimo ka baxsan shaqada . hadii uu dambigaas dhacay arinka waxaa amraya in la baaro kiiska (Socialstyrelsen och Överförmyndarnämden) Baaritaanka boliska marka uu xirmo arinka waxey u gudbinayaan jawaabta baaritaanka maxkamada markaa ka dib ayee maxkamada labada dhinac wareysi kooban la yeelaneysaa ka dibna go aan ayee gaareysaa . . Sida uu dhigayo Sharciga Gacanyara nolashiisa inta ka dhiman kama shaqeen doonto Shaqo Dowladeed Wiilka yar waxuu helayaa magdhow iyo caawimaad dhaqtar iyo Dhaqtar maskaxda ah Mahadsanidiin
December 23, 2011 at 19:30
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk wayaab wax kaste wala arka aduunkan
16 jir waa nin ween ilmo mahan
December 23, 2011 at 20:22
Marka hore meesha faaido mataalo hadey ayadu kadanbeysay iyo hadii asagu ka danbeyayba waa fal sharcidaro ku dhacay ayadana qasaaradi ka timid ay shaqadeda ku weysay asna aan la’ogeen dhibatada ka soogari karta marka aniga rayigeyga waakaa
December 23, 2011 at 20:36
ABAA XABADA WA AY QABOOWSATAY ASAGANA 16 MA EHEEN LEEN QABOW WAYE AHAHA
LAKIN ZINA WAX XUN WAAYE 2DOODABA QASAARO WAYE
December 23, 2011 at 21:08
asc wr wb walaal waa maahdsantihiin marka hore sidaad noola socodsiisaan arimaha wadanka ka jira tan 2ad walaal waxaan arkey warbixinta aad leediihiin haweeney aya ala seexatey wiil soomliyeed oo da,ayr wadanka ku jooga walaal sidaad hadalka u dhigteen waa laga haboonyahay aniga ra,yigeyga waayo adinka ma ogidiin inuu da,ay wadak akujoiogo iyo iney tiisa saxda ah tahay
December 23, 2011 at 22:47
Asc, Feysal… wiilka waa soomali yaadhahay mise meelkale ayaad ka soo aqrisay inta ma kuqorna wadankuu u dhashay wiilka, taaniyan waxaa istoo fuulxumo ah qoraalka intiisa u danbaysa maxaa faa,iido meesha keenay sinaaba kadhacdaye. Jimcaale horta bina aadan aatahy qaladna malaga waayo marka kistoo walalow markii aad wax ka qoraysid arimaha bulshada hadal fiican ku biloow kuna dhamee:-))) waa kuu han waynahay wlh waanana waa la isku leeyahay maxaa dhacay webkaan kaan ugu aqriska badanahay waayo!!
December 23, 2011 at 23:20
kkkkkk jimcaale manta maxaa kugu dhacay oodayaal aa aheen meeshaan figradaha falanqeeyo lkn manta sxb hakugu taagnaato waxaan kadhahno magaraneeno laba isku qaxday maxaan kadhahnaa oowaliba sino ah
December 23, 2011 at 23:34
marlay nin lakufsaday iska dheh … naag uunbaalaguogaa kufsiye ragiiina safka ayay sooogaleeen lololololo Jimaelle
December 23, 2011 at 23:57
waaaaaaaawa waa arin xasaasi ah waxasaa i maraa war wey dhaar saneet midaa mas uulne uma qalanto lakin asine caadi maahan tiris ayuu kudheeli eber waaaaaaaaaaaaye
December 24, 2011 at 00:26
Ar aniga xay iisoo mariweysay anaaa soo dhoweynlahaaa gaaalo oodhan sharcigoooda beeen kadhigilahaaaaye, kkkk lix iyo toban jir waaaba meesha ugu macaaan shaqoqarane madaale aaladhahaaaye lol
Lajecloow Mohamed says:
December 24, 2011 at 00:52
intaan dhihi lahaa dadkaas iga horeeyaa dhahay Yaa ayyuhalladiina aamnuttaqullaaha waquuluuu qowlan sadiidan waa aayad quraana fadlan wax wanagsan ku hadal wax wanaagsana qor wayo umadaan aa wax u qorayso maaha kuwa diin la’aanta ah ama kuwa salibiyiinta ah ee waa umad muslima kuwooda aan dhaqanka wanaagsan aqoon aa larabaa inay meesha wax ka bartaan marka akhii wanaaji hadaladaada intaasna wa kugu darsaday asc wr wb
December 24, 2011 at 03:09
ilaahay ha ina asturo dhamaanteenba…………..walaal
December 24, 2011 at 05:00
K.k.k.k.k.k.k iqyaarta ayadaa ayaa ka faa i daysatay wilka ma madama ayay gacanta ku haysay xanaanadiisa
December 24, 2011 at 08:40
kkkkkkkkkkkkk war way kufsatay wiilka naagta. nin baa wax kufsaday baan maqli jirnay naag baa wax kufsatay waa wax nagu cusub yaab!!!!!!!!!
ka faa,idaysasho ma taalo meesha horta.. tan kale wiil 16 ku joogo maxay tahay? ma adigaa og inuu ku joogo bes? maxaa kuu diiday inaa dhahdid wiil da,diisu tahay 16 ama lagu sheegay 16, ileen wariyaa tahaye qoraalkaaga qurxi oo anshax u yeel….
December 25, 2011 at 13:00
Illaa hadda waxaan arka dad aad u yar dadkaasii diinta, dadnimada iyo weliba hadalka wanaagsan u damqanaya..
Qofka qora shabakaddaan Somaliska.com anigu ma aqaan nin iyo naag wuxuu yahay laakin waxaan u arkaa qof Afsoomaaligu wax yar u baahan in laga caawiyo ama si kale haddaan hadalka u dhigo ay ku yartahay aqoonta weriye nimo.
Waxaa khalad ah qof wariye ah inuu yidhaahdo will 16 kujooga waddanka ma adigaa ka warqaba wuxuu ku joogo iyo waxa u qoran waxa u dhexeeya.??
Tanlabaad faa’iidada aad sheegayso maxay tahay haddii Diinta Islamka la eegana labadu waa dambiilayaal Zaaniyiin (Sineystayaal). Haddii Sharciga waddankan la eegana waa dambiilayaal. Marka Faa’iidadu waa maxay?
Mise hadalkaa kaa xumaaday ee waxaad rabtey kelmed aad dadka fikrado uga hesho oo taasaa kugu khasabtay inaan dhahdo ”Mala oran karaa ayadaa ka faa’iideysattay mise asagaa ka faa’iideysay”
Sxb faa’iido meesha ma taale labadaba khasaaraa u taal adiguna laftaadu iska eeg waxaad qorayso inta aad wax qoreysana ogow adigana waxbaa lagaa qorin. Wa qowluhuu tacalaa. ”Kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun”
December 24, 2011 at 15:36
asc all la yab maleh in ay arimahaas oo kale ay dhacaan somalid ayaaba malmahaan sheekoyinkaas ku noqday macruuf oo ilmo 16 jir iyo ilmo 11jir iyo ilmo 8bil jiro intaba lagu hayaa iyagoo xoogay marka ma ahan wax aad iyo aad la yab u leh laakiin waab hadiiba wax abahood ka badn agurigeyga ay imadaan ama sexdaan ama abtiyaashooda malin kasto ay dhacdaa tan wax ka weyn oo mudo 2years ka hore ay aheyd dalka ingariska markii dacwo fool xumo badna lagu soo rogay cunug 8bil jiro markii uu faro xumeyn jiray abtigiisa kadibna cunugii xanuun ka bixi wayay ispitalka la geyay raajo la saray xabadka dhan shahwad ka buxsantay marka wa ajiro dadka ku dhacdo ee ialahow inaga hayqof kasto walid ah mas ul aya aka saran ilamahiisa waa inuu ka fakiraa daryeelkooda usna qofna ogu tagin ka baxsan hooyadii dhashay ama abahii dhalay.
December 24, 2011 at 16:21
kkkkkk horta day yar islaan maba damci karo oo qaabilsan waa nin weyn qofkaas <dad ka hada sweden soo galana waa dad waa weyn oo da yar sheegta marka qofta waa garaacantahay ayada halaga waresto in uu 16 jiro yarkaas kkkk lkn labaduba faido ma jirto ee dambi bay ku dhaceen loo yaqaan ( zino ).
December 24, 2011 at 19:45
wiilka haduu soomaali yahay isagaa kafaa’iideystay
December 25, 2011 at 00:28
asc. faaiido maahan waa qasaaro ilaahey hanaga
December 25, 2011 at 01:05
K.k.k.k.k horta 16 jirka lashegayo wa nin weyn o da’yar shegtay. Naagtana ninkan xogan o si fican ugaraaci karo marke aragtay weku qabsatay isagana wa nin meel gaajo iyo qooq dilay ***. Marka waxa dhibka qaba wa hablahena somalida o nin xogan naagaha swedan naga dhacen k.k.k.k.k.
December 25, 2011 at 01:14
Ayada aya qaldan marka loo fiirsho sharciga sweden waxayna ahayd shaqaale aan aad loo carbin runtii.
wiilka wax qalad ah masaaray nin qoxooti ah oo 16 jira wax sharci ah oo qabta majiraan
December 25, 2011 at 10:17
ma ahan wax saas u dhibaato badan maadaama labadoodaba eey si wada jir ah u raaxeeysteen laakiin ma ahan in gabadha la dacweeyo maxaa yeelay waxa eey soo bandhigtay baahideeda waxaa eeyna gudatay shaqadeeda taas oo aheeyd xanaaneeynta wiilkaan dhalinyarada tana waxa eey ka mid tahay xanaanada dhalinyarada
oday ganta says:
December 25, 2011 at 11:08
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk waa arin la yaableh ilahey hanaga koriyo dhibaatadas arin fool xuma ah
December 25, 2011 at 11:11
caasho caadi matihid hadey xanaa neyta kamid raaxada waxgarad fikir kaada maxumo adiga ra yigaada
abdinasir borle says:
December 25, 2011 at 13:37
waxan malin kastay dhacane nin iyo naagow alabtina ilashta nikana nin yar ma, ha naf le u geysay sanadkase waxa suura gala nagta inuu ka wenyahay
December 26, 2011 at 11:46
waraa waa is naqaanaa yaanan been isku sheegin Soomalida sweden joogto dhan badankood dad yar ayey isku dhiibaan mana ahan niman Caruur leh aya qoranaayo 16 sano iyo naago habro ah walee waaan la yaabnay meshan gabarta qalad ayaa lagu haystaa sababtoo ah wiilka da diisa hala soo baaro ayaan dhihi lahaay hadii 16 sano noqdo hala xukumo naagta
December 27, 2011 at 09:01
adiga hadaa isku dhiibtay da yar dadka dhan ha u malayn sidaadoo kale iska soo galay xawilaada lagu keenay, 16 jirku wa nin naagtii loo geyo wuu ka dhalaayaa. soomaali waxay tiri nin walba wuxuu yuhuu dadka moodaa, marka dib iskugu noqo oo qiimee 16 jirnimadaadii malaha ,,,,,,,,,,,,,,
December 27, 2011 at 12:15
dhamaan waad salaaman tihiin asl cl wr salaan ka dib.
sidaa uma buurna waxa dhacay balse waa dambi labada qofood ay galeen oo ah in ay sineesteen , tan kale ruuxa dalbaday sinada ama damaca bilaabay waxa uu noqon karaa naagta ama ninka tan xigta wiilka waa 16 jir haddii uu Islaam yahay waa baaluq waa dambile ama hala dalbado ama isaga ha dalbado.
haddiise uu yahay christan xukunkooda hala raadsadeen oo islaanta daryeesha qaxootiga ama masuuliyada qofla lagu wareejiyo haddii ay iyada ku qasabtey iyadoo ku baarlaxawsatay in wax ay u fududeeynayso oo ka caawinayso howlaha qaxootimo sidaa ay uga faaiidaysatay iyadaa dambiga iska leh.
qofka wax qoraya sida saxaafad waa in uu ilaaliyaa adaabta iyo qowlka la qoray in uu noqdaa mid aan wax dhib ah ku yeelaneeyn maskaxda aadanaha, sida xaadgudub iyo mid aan ku habooneyn bulshada dhexdeda in laga tabiyo.
waa sidaa fikirkayga.
January 2, 2012 at 00:35
January 3, 2012 at 16:33
waxaan is weydiya qof waliba waxaay shegataay ayaa uu socda..lakiin nin marku damac galaay ama naag waa wax labada dhinaac ka dhacaay qalaadka maantana dadka badana wey is yareyaan dadana wey ka ordaan ,wadaanko ahadaba somalina kuma si jirta waaba dadka ugu badan oo dadoda ogaleyn anago beenta no shega waan yarahay nin yar ma taahriib soo gali lahay hadana waliid la soconin 16 jir meel isma mari karaayo ee alle ka caabsada ee iska dhafa beenta ile qof cadeyn wadaado ama la og yahay meeley ku dhalataay ma jirto waa leyska shegana moye